Muuqaal hal abuur leh | Ragga Stylish
Muuqaal hal abuur leh
Muuqaal-qaadiddu waa habka ama farsamada lagu eego naftaada dhexdeeda, inaad u aragto naftaada ujeeddada ugu weyn. Waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn ama aan caadi aheyn, laakiin waa dhaqan in waxay ugu shaqeysaa wanaaga siyaabo badan oo nafsi ah.
Ku celceli fikirkaaga si macquul ah, waxay kaa caawin kartaa inaad sifiican ugu diyaar garowdo noloshaan. Waana in xaqiiqdeennu ay la xiriirto fikirradeenna. Waa inaan maskaxdeenna ka buuxinno fikradaha iyo sawirrada togan si aan u helno waxa aan dooneyno.
1 Waa maxay Muuqaalka Hal-abuurka ah?
2 Sidee loogu dhaqmaa muuqaal ahaan?
3 Sawir-qaadiddu miyay la mid tahay mala-awaalka?
4 Sidee muuqaalku u saameeyaa maskaxdeena?
Waa maxay Muuqaalka Hal-abuurka ah?
Ka kooban naftaada qiyaasi inaad markhaati ka tahay xaaladaha aad jeclaan lahayd inaad la kulanto, halkaas oo aad hindiseen kartid oo aad qorsheyn kartid mustaqbal si aad hadda ugu sii noolaato. Waxay ku saabsan tahay fikirka iyo qiyaasi xaaladahaas kugu adkaan kara, halka halyeeyada aad ka tahay, iskuna day inaad diirada saarto sida loo noolaado loona xaliyo xaaladaas si wanaagsan.
Iyada oo qaabkan waxaan ku milicsaneynaa noocan ah muuqaalka iyo fiirsashada, daqiiqadii la rabay. Waa inaad ka fikirtaa daqiiqado kiciya iyo awood kugu filan awood u yeelatid inaad ku soo ceshadaan xaaladaas jihada ugu fiican.
Foomkan muuqaalku wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa dadka xishoodka badan, Iscasilaad cayiman si loo ilaaliyo xiriirka dadka kale, ama xitaa aan u dareemo cuqdad hadalkii aan ka jeedinaayay dadweynaha. Waad iska arki kartaa naftaada, waxaad soo bandhigi kartaa muuqaallo aad ku arki karto adiga oo hadlaya, xitaa noqoshada halyeeyga iyo xallinta xaaladdaas si guul leh, haa waa inaad u aragtaa daqiiqadaas si degan oo aamin ah.
Sidee loogu dhaqmaa muuqaal ahaan?
Muuqaalka sawirku kuma saabsana dib u abuurista xaalad meel kasta, ama wakhti kasta. Waa inaad dhaqan gelisaa dhaqankan Meel deggan, noqo mid raaxo leh oo ka sareysa dhamaan nasashada. Waxay waxyar u dhowdahay fekerka, maxaa yeelay awoodda fiirsashada. Waa inaad indhahaaga xidhataa oo aad ku nasan kartaa neefsasho isdaba joog ah oo aad isku daydaa inaad aragto daqiiqaddaas.
Waa inaad iska ilaali wixii fikir ah ee ku dhex milma fikradda aad rabto inaad dib u abuurto. Markaad gaartid yoolkaaga, sawir ka bixi faahfaahintaas, oo xitaa qiyaasi walxaha iyo canaasiirta qayb ka noqon kara deegaankaas. Waqtigaas waa inaad miisaanka muuqaalka oo qiyaasi inaad adigu abuureyso muuqaalkaas.
Qiyaas daqiiqadaas si qoto dheer: sida aad u labisan doontid, heerkulka, urta, dadka oo aad isku dayi doonto inaad ogaato waxa shucuurta xilligan kugu soo toosaya. Waa inaad ku qancisaa goobtaas sharaf, farxad iyo qanacsanaan.
Tani waa ujeeddada ugu weyn, ee goobtaas ay ku noqon karto mid qaddar ama wax u dhimaysa, adiga laftaadu durba waa tababaraysaa oo aad hindisaysa si markaas loogu xaliyo si qancisa. Haddii aad jimicsigaan sameysid, ugu yaraan laba jeer maalintii, waxaad arki doontaa sida aad ula jaanqaadi karto daqiiqadahaas oo adiga kugu weyn, waa hubaal in xaqiiqadaadu waxay bilaabmaysaa inay isbadasho.
Sawir-qaadiddu miyay la mid tahay mala-awaalka?
Isku mid maahan. Muuqaalka haddii si sax ah loo sameeyo, wuxuu diiradda saarayaa dhammaan noocyada faahfaahinta, waa mid dhab ah oo ka mira badan. Mala-awaalku wuxuu sawirayaa muuqaal sidii aad u daawaneysid filin bilaa faahfaahin dheeraad ah. Laakiin waa run in labada ereyba la isku daray, male-awaalku waa qayb ka mid ah farsamadan, laakiin waa in loo adeegsadaa qaab wax ku ool ah oo qancin kara.
Dhaqan ahaan, waa inaad isticmaashaa muuqaal ahaan mala-awaal faahfaahin yar oo u oggolaan kara waxyaabo yaryar oo fudud. Sidan ayaad si tartiib tartiib ah ugu tababbaraneysaa inaad diirada saarto faahfaahintaas weyn. Dhacdooyinka ugu soo noqnoqda iyo kuwa muuqda badiyaa waa daqiiqado khilaafsan nolosheena maalinlaha ah, sida loo qaato imtixaanka wadista, u tag wareysiga shaqada, taariikhda ugu horeysa, ama ciyaartooyda xirfadleyda ah, halkaas oo ay aadi doonaan xirfadlayaal si ay uga dhigaan inay xalliyaan xaaladaha tartanka iyo halka ay tahay inay aaminaan inay guuleysan doonaan.
Sidee muuqaalku u saameeyaa maskaxdeena?
Ku buuxi miyir qabka fikradaha wanaagsan iyo sawirrada, waxay noqon doontaa hab lagu tababaro maskaxdeena aragtida saxda ah, adigoon na dhaawicin. Ku celcelinta noocan ah haddii la xakameeyo waxay nagu hogaaminayaan inaan helno wadada saxda ah.
Nooca fikradaha waxaa lagu cabiraa waxa qof walba aaminsan yahay. Hadaadan badalin habka fikirkaaga, hubaal waxkasta oo ku dhaca nolol maalmeedkaaga, waa lagu celceliyaa. Sidan oo kale, haddii maskaxdaadu caajis tahay, waxay u badan tahay inay kaa qaadi doonto dhiirigelintaada inaad adkaysto.
Sidaa darteed, muuqaalaynta waa in loo sameeyaa wanaagga qofka, laakiin si xushmad leh. Dadku waxay ula dhaqmaan si qarsoodi ah, laakiin oo leh cawaaqibyo u soo saari kara waxtar naftooda. Waa inaad taqaanaa sida loo kala sooco habka danaysiga ah ee loogu hor dhaqmayo dadka kale, haddii aan wax u aragno sida shakhsiyaddeennu tahay, waxaad u maleyneysaa inaadan arkin xaalad dhab ah.
Taasi waa sababta is-hoosaysiinta waa inay ka dhex jirtaa qofkaas oo aan lagu jahwareerin altruism. Waa inaan isku daynaa inaan ka buuxino booska maskaxdeena xaqiiqooyin, xaqiijin iyo fikrado wanaagsan oo wixii intaa ka sarreeya aan la jaanqaadno waxa aan dooneyno inaan helno. Dhaqankan muddo kadib ayaa naga caawin doonta sidii aan u hirgelin lahayn muuqaalka aan dooneyno inaan metelno oo sidaas ayay ku hindiseen uguna sharciyeeyeen maalintii oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Muuqaal hal abuur leh
Muraayadaha indhaha ee buurta